YEYINTNGE(CANADA): Friday, April 15
15 April yeyintnge's Diary.doc
15 April yeyintnge's Diary.pdf
15 April yeyintnge's Diary
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 4/15/20110အကြံပြုခြင်း
ရင်နာစရာတွေ . . . (ချိုတူးဇော်)
by Cho Tu Zal on Friday, April 15, 2011 at 1:52am
ရက်အနည်းငယ်က မိတ်ဆွေအယ်ဒီတာတယောက်နဲ့ဆုံတော့သူကကျွန်တော့်စာတွေ ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်မှာ ဟော့တ် နေတယ်လို့ ပြောပါ
တယ်။တဆက်တည်း`ကိုချို ၂၀၁၅ အတွက်ပြင်ဆင်နေတာလား´ တဲ့ ။
သူ့ကိုဘာမှပြန်မပြောခဲ့ပေမယ့် အပြန်လမ်းတလျှောက်လုံး တနုံ့နုံ့နဲ့ ။ ကျွန်တော်ခုလို ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်မှာစာတွေရေးနေတာနဲ့ပါတ်သက်ပြီးအမျိုးမျိုးဝေဖန်ကြ၊ကောက်ချက်တွေပေးကြတာကို ပြန်ပြန်ကြားရ တိုင်းစိတ်ပျက်စရာတွေများ ပါတယ်။တချို့ကခုနကအယ်ဒီတာလို နိုင်ငံရေးရည်ရွယ်ချက်တခုခုနဲ့ ရေးနေတာလို့သတ်မှတ်ကြပြီး၊တချိုကျတော့ နာမည်ကြီးဖို့၊အောင်မြင်ဖို့လို့ယူဆကြပြန်တယ်။တချို့ကတော့ ဒါ့ထက်ဆိုးပါတယ်။ဒုက္ခသည်အနေနဲ့ နိုင်ငံရေးခိုလှုံခွင့်ရချင်လို့ တဲ့။
စာရေးတယ်ဆိုတာ step မဟုတ်ဘူးပါဘူးဗျာ ။ destination ပါ။ တခြားအလုပ်တခုခုကို ကူးဖို့၊လုပ်ဖို့ရေးတာမဟုတ်ဘူး။ ပြီးပြည့်စုံတဲ့ အလုပ်တခုပါ။ပန်းတိုင်တခုပါ။
စာရေးဖေါ်စာရေးဖက်အချင်းချင်း မေးခွန်းလေးတခုကို မေးလည်းမေးချင်၊ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်လည်း ပြန်စဉ်းစားကြစေချင်ပါရဲ့။ဘာလို့စာရေးဖြစ်တာလဲ လို့။ ကျွန်တော်တော့ မရေးရရင်မနေနိုင်လို့ ဆိုတဲ့အဖြေကိုပဲ အရိုးသားဆုံးပေးရပါလိမ့်မယ်။ စာရေးတာဟာ မရေးရရင်မနေနိုင်လို့ရေးတာကအဓိကပါ။ ရေးတဲ့အခါမှာလည်း ကိုယ်တကယ်ခံစားနေရတဲ့ ကိုယ့်ရင်ထဲမှာငြိတွယ်နေတဲ့အကြောင်းအရာကိုပဲ ရေးလို့ရပါတယ်။
ဘယ်လောက်ပဲ အတတ်ပညာနဲ့ ရေးရေး၊တကယ်စိတ်ထဲကမပါရင် အဲဒီစာမျိုးက ဖတ်လို့ကိုမချောပါဘူး။
ဘာလို့ စာရေးလည်းဆိုတော့ စာရေးတာတခုထဲ ဘ၀မှာ ထွက်ပေါက်ရှိလို့၊ဖြေသိမ့်စရာ ရှိလို့လို့သာဖြေချင်ပါတယ်။ ဒီစာရေးလို့မှ ဖမ်းမယ်ဆိုလည်း ဖမ်းပါစေတော့၊သတ်ပစ်လိုက်ရင်ပိုတောင်အေးသေးလို့သာသဘောထားတယ်ဗျာ။
အနုပညာသမား တယောက် အနုပညာလုပ်လို့မပျော်တော့တာထက် ရင်နာစရာကောင်းတာ ဘာမှမရှိတော့ဘူးထင်ပါရဲ့ ။
ကျွန်တော့် ဒုက္ခက ကိုယ်ဝမ်းနာကိုယ်သာသိပေါ့၊အထုတ်ဖြေချပြရမယ်ဆိုရင် ဒါရိုက်တာတယောက်အနေနဲ့ လက်ရှိ တကားကို ၀တ္ထုဇာတ်ညွှန်းဒါရိုက်တာခ ၁၂ သိန်းရပါတယ်။ ဗီဒီယိုကားတကားကို အများဆုံး ၁၀ ရက်ကနေ၊ ၇ ရက် ၈ ရက်ပဲ ရိုက်ရပါတယ်။ ဒါ့ထက်ပိုပြီးတော့လည်း ဘယ်ပရိုဂျူဆာမှ ရိုက်ခွင့်မပေးတော့ပါဘူး။ သိတဲ့အတိုင်းမြန်မာဗီဒီယိုဇာတ်ကားတိုင်း ဇာတ်လမ်းတွေအရမ်းဆင်းရဲကြပါတယ်။ တခါလာလည်းမိန်းမတယောက်နဲ့ယောက်ျားတယောက်ချစ်မှကြိုက်မှ၊တခါလာလည်းအမေက အနူမကြီး၊ကြက်မကြီး ဟာ စုံနေတာပါ။ နည်းနည်းထူးထူးခြားခြားဇာတ်လမ်းလေးတွေ့လို့ ချီးကျူးမယ်ရှိသေး ကုလားကား၊တရုတ်ကား၊ကိုရီယားကားကို ပြန်ရိုက်ထားတာဖြစ်နေပြန်ရော။ ကျွန်တော်လည်း နုစဉ်တုန်းက နိုင်ငံခြားကား၊နိုင်ငံခြားဇာတ်လမ်းတချို့ကိုပြန်ရေးဖူး၊ပြန်ရိုက်ဖူး
ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အဲဒီလိုပြန်ရိုက်ဖြစ်တိုင်း မူရင်းဇာတ်ကားနဲ့ကွဲပြီး ကိုယ့်မြန်မာအငွေ့အသက်လွှမ်းအောင် ကြိုးစားဖန်တီးပါတယ်။
ကျွန်တော့်ကိုလွှမ်းမိုးခဲ့တဲ့ မှုန်ရွှေရည် တို့၊ တိမ်လွှာမို့မို့လွင် တို့၊ ဆရာကြီး(ဦးဝင်းဖေ) ရဲ့ မြင်းမိုရ်ထက်မြင့်သော တို့ဟာ နိုင်ငံခြားကားတွေကို ပြန်ရိုက်ထားတာပါ။ ဒါပေမယ့်ဒါရိုက်တာတယောက်ဟာအနုပညာပစ္စည်းတခုကို ပြန်တင်ပြတယ်ဆိုရင် သူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်
ဟန်နဲ့ ကိုယ်ပိုင်အငွေ့အသက်လွှမ်းပြီးဖန်တီးမှလှတယ်လို့ မြင်ပါတယ်။ ခုနကပြောတဲ့ကားတွေကို ကြည့်ဖူးကြရင်သိမှာပါ။ မှုန်ရွှေရည် ဆို တကယ့် မြန်မာ့အငွေ့အသက်ထုံလွှမ်းနေတဲ့ကားဗျာ။ မြင်းမိုရ်ထက်မြင့်သော ဆို A family ဆိုတဲ့ ဂျပန်ကားကို ပြန်ရိုက်ထားတာပါ။ နောက် ဆရာကြီးကပဲ သူစိမ်းဆိုပြီး ဗီဒီယိုပြန်ရိုက်ပါသေးတယ်။ဂျပန်ကား A family ဟာ သူစိမ်းဖြစ်တဲ့အချိန်မှာ ကျောရိုးလောက်သာကျန်တော့ပြီး ဆရာကြီးပြောချင်တဲ့ မက်ဆေ့ခ်ျက သီးသီးခြားခြားပေါ်လွင်လာပါတော့တယ်။ ဒါရိုက်တာတယောက်ဟာ သရီးဒိုင်းမင်းရှင်း အမြင်ရှိမှ ဇာတ်ကို ဟိုဘက်ကလှည့်ပြ၊ဒီဘက်ကလှည့်ပြ ပြတတ်ပါတယ်။ ခုတော့ လုပ်နေကြတာများဗျာ။
ဇာတ်ကိုဇာတ်ညွှန်းကို တထေရာတည်းယူရုံတင်မကဘူး၊ကင်မရာထောင်တာကအစ၊ ကတ်ခွဲတာကအစ ထပ်ချပ်ယူထားတော့တာပါပဲ။
ဟိုးတုန်းက ရွာနေအိမ်ထိုင်ပရိုဂျူဆာကြီးတွေအစား ခုမှဝင်လာတဲ့ခေတ်ပျက်ပရိုဂျူဆာတွေကလည်း ဟိုကုလားကားလေးကိုပြန်လုပ်ပါလား။ဒီကိုရီးယားကားလေးကိုပြန်လုပ်ပါလားနဲ့ အပ်ထည်ပေးတတ်ကြပါတယ်။
ကျွန်တော့်အသက်လေးဆယ်တန်းရောက်လာတဲ့အချိန်မှာ ကျွန်တော့်ကိုယ်ကျွန်တော်ဆင်ခြင်ပါတယ် ။ ဒီအသက်ဒီအရွယ်ရောက်မှတော့ဘ၀လည်းခေါက်ရိုးကျိုးနေပြီ။လုပ်ချင်တာတွေလည်းအထိုက်အလျောက်လုပ်ပြီးပြီ၊လုပ်သင့်တာတွေထဲက လုပ်နိုင်သမျှပဲလုပ်တော့မယ် လို့ပါ။ တကယ်တမ်းကျတော့ အဲဒီဆုံးဖြတ်ချက်ကိုအကောင်အထည်ဖေါ်တဲ့အခါမှာ ခက်ခဲပင်ပန်းမှုတွေအများကြီးရင်ဆိုင်ရပါတယ်။
အရင်ဆုံး က အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပါ။ ကားရိုက်လို့အဆင်မပြေတော့ပါဘူး။ ဒီနေ့ပရိတ်သတ်ကြိုက်တယ်ဆိုတဲ့ ဇာတ်ကားမျိုးတွေကျွန်တော်မရိုက်နိုင်တော့ဘူး။ ကျွန်တော်ရိုက်ချင်တဲ့ကားတိုင်းလည်း ပရိုဂျူဆာတွေကလက်မခံနိုင်ဘူးလေ။ နောက်မြန်မာဗီဒီယို လောက
ကြီးရပ်တည်လည်ပတ်နေတဲ့ ဈေးကွက်စနစ်က မင်းသားဗဟိုပြုစနစ်ပါ။ မင်းသားနဲ့ဈေးရောင်းကြတာပါ။ ဆိုပါတော့ နေတိုးဆိုရင်အထက်မြန်မာပြည်ကဘယ်လောက်၊ရခိုင်ကဘယ်လောက်၊မွန်ကရင်ကဘယ်လောက်၊တနင်္သာရီကဘယ်လောက်၊ရန်ကုန်မှာ တဆိုင်ကိုအာရ်စီကြေးဘယ်လောက်စသဖြင့် မူပိုင်ကြေးနဲ့ဖြန့်ကြတာ။ ဒီတော့ နေတိုး ဆိုတာနဲ့ အဲဒီဈေးပါ။မင်းသမီးပေါ်မူတည်ပြီးဈေးကွာလှနည်းနည်းပေါ့။ ဘယ်ဒါရိုက်တာ ရိုက်ရိုက်၊ဘယ်လိုရိုက်ရိုက်၊ဘာရိုက်ရိုက် နေတိုး ဆိုတာနဲ့ အဲဒီဈေးပါ။ ဒီတော့ ဒါရိုက်တာတွေက အလိုအလျောက် ဘေးရောက်လာပါတော့တယ်။ ဒါရိုက်တာတယောက်ရဲ့ ရပ်တည်မှုဟာ မင်းသားရက်ချိတ်နိုင်မှုပေါ်မူတည်ပါတော့တယ်။ ခုနောက်ပိုင်း တိုက်ပိုင်(ကိုယ်ပိုင်ကုမဏီ နဲ့မင်းသားတွေ)မင်းသားတွေပေါ်လာတော့ ဒါရိုက်တာက ဘာလုပ်ရသလဲဆို ဈေးရောင်း
သလို ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းလေးကို အဲဒီ ကုမဏီကိုသွားပို့ပြီး ရိုက်ချင်ပါကြောင်းကမ်းလှမ်းရပါတယ်။ အဲဒီတော့မှ ထုတ်လုပ်သူက ဖတ်ပြီးဘယ်နေ့ဘယ်ရက် ဘယ်လ စသဖြင့် ရက်ချိတ်ပြီး ရိုက်ခွင့်ရပြန်ပါတယ်။ လက်ရှိဒါရိုက်တာတယောက်ရဲ့အရည်အချင်းက ဘယ်လိုဆန်းသစ်တီထွင်ရိုက်လိုက်တယ်၊ဘယ်လို လူ့အဖွဲ့အစည်းကို ကိုယ်စားပြုတဲ့ ပြချက်တွေနဲ့ ဒဿနတွေပါတယ် ဆိုတာ အဓိကမဟုတ်တော့ပါဘူး။ ဘယ်လောက်မြန်မြန်ရိုက်နိုင်သလဲဆိုတာ အဓိကပါ။ အပြေးပြိုင်နေကြသလိုပါပဲဗျာ။ ပုံမှန် ၁၀ ရက်တောင် နည်းလှတာ ၈ ရက် အဲဒီကနေ ၇ ရက် တချို့များ ၅ ရက် ၆ ရက်နဲ့အပြီးတဲ့။အဲဒီလို အမြန်ပြီးအောင် ရိုက်ကြတော့ ဘာ Lighting မှလည်းမချိန်နိုင်၊ဘာမှပြင်ဆင်ခွင့်လည်းမရှိ၊မင်းသားမင်းသမီးပေးတဲ့ ရက်ထဲကားပြီးအောင်ရိုက်နိုင်ဖို့သာအဓိကဖြစ်လို့လာပါတယ်။
ဇာတ်လမ်းရွေးရင်လည်း ဘယ်လောက်ကောင်းကောင်း လူနည်းဖို့၊တတ်နိုင်သမျှကျဉ်းဖို့ ကအဓိကရွေးရပါတယ်။ တော်တန်ရုံအကြောင်းအရာကို ပြမနေပဲ ပြောပစ်လိုက်ကြလေရဲ့။ဒီလိုနဲ့ မြန်မာကားတွေဟာ ထိုင်ပြော၊ထပြော၊ရပ်ပြော၊လျှောက်ပြော ပြောပြီးပဲပြောကြတော့တာပါပဲ။ ရုပ်ရှင်ရဲ့သီအိုရီမှာ အရုပ်နဲ့အသံ အရုပ်ကအဓိကဆိုတာလည်း မရှိတော့ပါဘူး။ တခြားဒါရိုက်တာတွေတော့မသိဘူး ကျွန်တော်ကတော့ ကားတကားရိုက်ပြီးတိုင်း မကောင်းမှုတခုကို တခါကျူးလွန်မိသလိုခံစားရတယ်။ ကိုယ်တတ်ထားသမျှ၊လေ့လာထားသမျှနဲ့ဘာမှ
မဆိုင်တဲ့ စိတ်ပျက်စရာကောင်းတဲ့ အလုပ်တွေကို လုပ်လိုက်ရတာလေ။
အဆိုးဆုံးက အနုပညာမတောက်တခေါက်ပရိုဂျူဆာတွေ၊တကိုယ်ကောင်းဆန်တဲ့ အနုပညာသမားတပိုင်းပရိုဂျူဆာတွေနဲ့ရိုက်ရတာပါ။ ပရိုဂျူဆာသက်သက်တွေက သူတို့ငွေကြေးအမြတ်အစွန်းအတွက်ပဲ မြန်မြန်ရိုက်ဖို့၊ကျဉ်းကျဉ်းရိုက်ဖို့လောတာလောက်ပဲ ရှိပေမယ့် အနုပညာမတောက်တခေါက်ပရိုဂျူဆာတွေက အလုပ်ထဲမှာပါ လာစွက်ဖက်တတ်ပါသေးတယ်။ ဒါ ဒီလိုရိုက်လိုက်ရင် ရတာပဲ ဆိုတာမျိုးပြောတတ်ကြတယ်။ တကိုယ်ကောင်းဆန်တဲ့အနုပညာသမားတပိုင်းပရိုဂျူဆာကတော့ ပြောမနေပါနဲ့တော့။သူ့ကားသူရိုက်ရင် နယ်တွေသွားမယ်၊ ကုန်ကျခံမယ်၊တခြားဒါရိုက်တာတွေကျရင် ၈ ရက်နဲ့အပြီး ရိုက်ခိုင်းမယ်၊ နောက်ကနေ အမျိုးမျိုးချုပ်မယ်၊တွန်းမယ်။
ပိုက်ဆံရတာနဲ့မကာမိအောင် ခေါ်ပြီးအနုပညာသတ်တာ ခံနေရသလိုပါပဲ။
ထုတ်လုပ်သူတွေ ပါးစပ်လက်ဆင့်ကမ်းလာတဲ့စကားလုံးတလုံးကို မကြာသေးတင်က ထပ်ကြားလိုက်ရတယ် ။
`ခင်ဗျားတို့ ရူးသွပ်တိုင်း ပိုက်ဆံက ပြန်ရှာလို့ မရဘူး´ တဲ့။
ပရိုဂျူဆာတွေစိတ်ကြိုက် မြန်မြန်လွယ်လွယ်ရိုက်၊မင်းသားမင်းသမီးတွေနဲ့အဆင်ပြေအောင်ပေါင်းပြီး တလကို ၃ ၄ ကားရိုက်စားနေကြတဲ့သူတွေ ရှိပါတယ်။ ဘာပဲပြောပြော မြန်မာပြည်အနေနဲ့ မဆိုးလှတဲ့ဝင်ငွေပေါ့ ။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်မပျော်ဘူး။ လွန်ခဲ့တဲ့ ၂ နှစ်လောက်က သူငယ်ချင်းလိုညီအကိုလိုခင်တဲ့ လွင်မိုး နှိပ်စက်လို့ အဲဒီလိုမျိုး ရိုက်ခဲ့ရဖူးပါတယ်။ တလကို ၂ ကား၂လကို ၃ ကားနှုန်းလောက်ရိုက်ရတဲ့အခါ ဇာတ်ညွှန်းလည်းသေချာပြင်ဆင်ချိန်မရ၊ တည်းဖြတ်လည်းသေချာလုပ်ခွင့်မရပါဘူး။ တကားပြီးတကား နောက်တကားအတွက်
ပဲ လုပ်ရပါတယ်။ ပိုက်ဆံတော့ရတာပေါ့ ဒါပေမယ့် မောမောနဲ့အိမ်ပြန်ရောက်လာလို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်သုံးသပ်ရင် မပျော်ဘူး။ ကျွန်တော်ပိုက်ဆံလိုချင်ရင် ဒါ့ထက်ပိုက်ဆံရတဲ့ စီးပွားရေးအလုပ်တွေ အစကတည်းကလုပ်ခဲ့မှာပေါ့။ အနုပညာအလုပ်တွေကို လုပ်ချင်လို့ အနုပညာသမားဘ၀ကို ခံယူလျှောက်လှမ်းလာတာလေ။ ခုတော့ ဇာတ်ညွှန်းလည်းကောင်းကောင်းမရေးရ၊ ကားလည်းကောင်းကောင်းမဆက်ရ ဒီတော့ မပျော်ဘူး။ဒီလိုပြော၊ဒီလိုရေးတာကိုနားလည်သူကနားလည်သလို၊နားမလည်တဲ့သူတွေအများကြီးပါ။
ကြော်ငြာရိုက်ဖို့ လာအပ်တော့ ကျွန်တော်ကြော်ငြာမရိုက်ဘူး လို့ငြင်းတာကို တအံ့တသြဖြစ်ကြပါသတဲ့။ ဒါရိုက်တာဗျာ၊အနုပညာသမားဗျာ။ ကဗျာရေးတဲ့သူ၊စာရေးတဲ့သူက ကြော်ငြာ ရိုက်ရမလား လို့ကျွန်တော်ကပြန်မေးတော့ ကျွန်တော့်ကို ငကြောင်လို့ပဲသဘောထားပါတယ်။ ကြော်ငြာတခုကို ၁ ရက် ၂ ရက်နဲ့၊ဒါရိုက်တာခအပြည့်ရတော့(တချို့ဒါ့ထက်မက) ဒါရိုက်တာတိုင်းမက်ကြတယ်။
အဓိကဘာကွာနေတာလဲဆိုတာ ကျွန်တော်သုံးသပ်မိတာကတော့ ဘ၀ကိုတန်ဖိုးထားတာခြင်းကွာနေတာပါ။ ကျွန်တော့်မှာပိုက်ဆံမရှိတဲ့အခါ ကိုယ်ပိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေ တခုပြီးတခုချရောင်းပါတယ်။ ကျွန်တော်စိတ်မ၀င်စားတဲ့ အနုပညာတွေကို ဖန်တီးဖို့တော့ ကျွန်တော့်ကိုယ်
ကျွန်တော်မရောင်းချင်ဘူး။ခု ကားရိုက်ရတာ ပိုပျော်စရာမကောင်းဘူး။ကျွန်တော့်မှာ အနုပညာတွေ ရှိပါသေးတယ်။ အိပ်မက်တွေ ကျန်နေပါသေးတယ်။
ကျွန်တော်လေ . . . ဓမ္မ၀ိလာသ ကိုရိုက်ချင်တယ်။ ဆရာမ ဂျူး ရဲ့ချင်းတံငါမလေးကိုချစ်ကြိုးသွယ်မိတဲ့ ကျောင်းဆရာလေးတယောက်
အကြောင်း . .ကျောက်စာ ကို ရိုက်ချင်တယ်။ ဒါပေမယ့် ဓမ္မ၀ိလာသကို ဖြတ်လျှောက် ရာချီမသုံးရရင် မရိုက်ချင်ဘူး။ တယောက်ယောက်က ဖြစ်ကတတ်ဆန်း ရိုက်သွားလည်း ကျွန်တော်စိတ်မကောင်းပဲဖြစ်မှာပါ။ ကျွန်တော်တော့ အဲဒီလိုမရိုက်ဘူး။ ကျောက်စာကိုလည်း ၁၀ ရက် ၁၅ ရက် လောက်နဲ့အပြီးမရိုက်နိုင်ဘူး။ နေ၀င်နေထွက်အဲဒီချင်းပြည်မှာ ကျွန်တော်ကင်မရာကို ဘယ်လိုထောင်ရမလဲဆိုတာအချိန်တွေပေးပြီး ရိုက်ချင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အိပ်မက်တွေဟာ အိပ်မက်ပြီးတော့သာ နေလျှက်ပါ။
ကျွန်တော့် ရဲ့ လွမ်းစိမ့် ကို ဆင်ဆာခွင့်ပြုချက်မပေးတော့ ပြည်သူကြားတခုခုလုပ်ခွင့်ရဖို့ ပရိုဂျူဆာ(တာဝန်ခံ) ကိုသွားညှိပါတယ်။ ကျွန်တော့် နေတဲ့အခန်းကို ပြန်ရောင်းပြီး ခင်ဗျားထုတ်ထားတဲ့ ငွေတွေကိုပြန်လျော်မယ်ဗျာ ကျွန်တော့်ကားကို ပြရမှဖြစ်မယ် ။
ကျွန်တော့်ကို နားလည်မှုအပြည့်ထားပေးတဲ့ သူ က ကြောင်းကျိုးပေါင်းများစွာနဲ့ရှင်းပြပြီး မကြာခင်ဆင်ဆာလွတ်လာနိုင်ကြောင်းပြောလိုက်ပါတယ် ။
မကြာခင် . .တဲ့..ဆိုပါတော့
ဒီလိုနဲ့ပဲ . . . .
လွမ်းစိမ့် သာ ပြခွင့်မရရင် . . .
ကျွန်တော်တော့ အသည်းတွေထပ်ကွဲ ရဦးမှာပါပဲ .။
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 4/15/2011 1 အကြံပြုခြင်း
Vital Voices: Aung San Suu Kyi Honoree Acceptance Remarks
Vital Voices_ Aung San Suu Kyi Honoree Acceptance Remarks [HQ].mp4
by Sophia Sofia Chan
Daw Aung San Suu Kyi accepts the 2011 Vital Voices Global Trailblazer Award. Although she could not leave Burma to attend the event. She recorded these remarks to be played at the Awards which took place on April 12, 2011 at the John F. Kennedy Center for the Performing Arts in Washington DC.
ချစ်သူတွေပျော်တဲ့ ၂၀၁၁ သင်္ကြန်
Videos Posted by Ah Bayah on facebook
NLD လူငယ်တွေရဲ့ စတုဒီသာလှူဒါန်းပွဲ (၁၅ ဧပြီလ ၂၀၁၁)
By ဒေါ်ခင်မျိုးသက် ကြာသပတေး, 14 ဧပြီ 2011
စုံစမ်းရေးကော်မရှင်ပေါ်ပေါက်ရေး အမေရိကန် ဦးဆောင်ဖို့ ဆွေးနွေး
Vital Voices: Aung San Suu Kyi Honoree Acceptance ...